एक सयभन्दा बढी नाक, कान घाँटीका विशेषज्ञ चितवनमा
रत्ननगर (चितवन), १० फागुन। नेपालका करिब एकसयभन्दा बढी नाक, कान घाँटीका विशेषज्ञसहितको सहभागितामा चिकित्सकको राष्ट्रिय भेला बिहीबारदेखि चितवनमा सुरु भएको छ। भारतका विशेषज्ञ तथा प्राध्यापकसहितको सहभागितामा यहाँ बिहीबारबाट चिकित्सकको छैंटांै राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनको क्यान्सर अस्पतालमा सुरु भएको छ। सोसाइटी अफ ओटोलर्‍यानोलोजिस्ट अफ नेपालको आयोजनामा भएको यो सम्मेलनमा आज नाक, कान र घाँटीको क्यान्सरका चारजना विरामीको शल्यक्रिया गरी प्रत्यक्षरूपमा देखाइएको थियो।… पुरा पढौ
नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारणसभाको तयारी
पोखरा, १० फागुन। नेपाल पत्रकार महासङ्घको आगामी चैत ९ र १० गते पोखरामा हुने केन्द्रीय साधारणसभाको लागि महासङ्घ कास्कीले तयारी थालेको छ। महासङ्घ कास्कीको बिहीबार बसेको बैठकले साधारणसभामा कास्की शाखाबाट मूलसमारोह समितिमा विभिन्न नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा माधव शर्मा, कुसुमकेशव पराजुली, कृष्णप्रसाद बाँस्तोला, पुण्य पौडेल, रवीन्द्र बाँस्तोला र नारायण कार्की, पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष गंगाधर पराजुली, महासङ्घ कास्कीका… पुरा पढौ
पोखरा विश्वविद्यायलको १० औ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गुणस्तरीय शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने : शिक्षामन्त्री शर्मा
लेखनाथ, ९ फागुन। पोखरा विश्वविद्यालयको १० औं दीक्षान्त समारोह बुधबार लेखनाथको खुँदीमा सम्पन्न भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको वाषिर्क कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षविभिन्न संकायमा अध्ययनरत् एक हजार सात सय ३७ जना विद्यार्थीलाई विशेष समारोहबीच दीक्षित गरिएको हो। गत वर्षएक हजार तीन सय ७७ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए। कुलपतिका हैशियतले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई आउनुपर्ने भए पनि मुलुकमा पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतिक… पुरा पढौ
प्रवेशिका परीक्षा तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ, ९ फागुन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विसं २०६९ को प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। शिक्षा पत्रकार सञ्जालद्वारा बुधबार काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार परीक्षाका लागि एकहजार ७८६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। प्रवेशिका परीक्षा आगामी चैत १ देखि ९ गतेसम्म हुँदैछ। परीक्षामा नियममिततर्फ चार लाख ३० हजार ९७ र एक्जेम्टेडतर्फ एक… पुरा पढौ
देशका अन्य स्थानमा के भए ?
पोखरा, ८ फागुन । नेकपा-माओवादीले आहृवान गरेको बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा बन्दकर्ताले सवारी दर्जन बढी सवारी तोडफोड गरेका छन्। बन्दका क्रममा नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताले काठमाडौं वनस्थलीमा बा ४ च ८१०१ नम्बरको गङ्गालाल अस्पतालका कर्मचारी बोक्ने बसको सिसा फुटाएका छन्। त्यसैगरी जोरपाटीमा बा१ख १७७१ नम्बरको माइक्रोबसको दाहिने पट्टीको सिसा फुटाएका छन् भने नयाँ बजारमा बा१ज १५३८ नम्बरको ट्याक्सीको सिसा… पुरा पढौ
तनहुँमा मोटरसाइकल जल्यो
तनहुँ, ८ फागुन। नेकपा-माओवादीले आहृवान गरेको नेपाल बन्दमा तनहुँमा बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै कार्यकर्ताले एउटा मोटरसाइकल जलाएका छन्। पोखरा-१५ बस्ने मीनबहादुर घलेले चलाएको ग६प ९१०६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ढोरफिर्दीबाट आउँदै गर्दा तनहुँको दुलेगौडा-३ गाछेपानीमा रोकी आगो लगाई पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याएका छन्। मोटरसाइकलमा आगो लगाएलगत्तै कार्यकर्ता त्यहाँबाट फरार भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराका प्रहरी निरीक्षक हरी शर्माले जानकारी दिए। बन्दको क्रममा जिल्लामा… पुरा पढौ
पोखरा, ६ फागुन। क्यान कास्कीले फागुन १० देखि १३ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको चौथो पोखरा क्यान इन्फोटेक मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मेला मूलआयोजक समितिले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो। विकशित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले मेला गर्न लागिएको मूल आयोजक समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए। मेलामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ८० वटा… पुरा पढौ
लेखनाथ जेसीजले १५ औं स्थापना दिवस मनायो
लेखनाथ, ६ फागुन। लेखनाथ जेसीजले आफ्नो १५ औं स्थापना दिवस लेखनाथ महोत्सवस्थल भण्डारढिकमा मनाएको छ। जेसीज अभियानका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले महोत्सवस्थलमा राखिएको कार्यक्रमा बोल्ने वक्ताहरूले जेसीजले सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। लेखनाथ जेसीजका अध्यक्ष नगेन्द्रराज बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा लेखनाथ जेसीजका पूर्वअध्यक्ष सुमन भट्टराईले जेसीजले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनका लागि… पुरा पढौ